Uzo ozo Netflix nke na-enuba ihe nkiri na ihe onyonyo n’efu - BGR - TELES RELAY
Uzo ozo Netflix nke na-enuba ihe nkiri na ihe onyonyo n’efu
Ndị a bụ ihe nkiri iri a na-elele na nke onye ọ bụla…
Ihe a bụ ihe ịtụnanya nke ga - emecha zaa ajụjụ anyị.…
Vidiyo si na telivishọn leaked lebara anya "Falcon" na-ekpughe…
Netflix ka wepụtala ndepụta nke ihe nkiri nke March 2020 na ihe ngosipụta, na-echetara anyị ọzọ ihe kpatara nke a ji kacha ọrụ nkwanye ugwu ọnwa nwere ike ịzụta. Ọnwa na-abịa, Netflix ịhapụ ihe nkiri izizi 55 dị iche iche, ihe ngosi na ọpụrụiche ndusụk ini ke March. Na mgbakwunye, ọ naghị ekpuchi ọdịnaya niile agbakwunye na katalọgụ Netflix site na Studio ndị ọzọ. Enwere aha ọhụrụ iri atọ na atọ agbakwunye na Netflix naanị na Machị 33, ihe nkiri iri na atọ ndị ọzọ na oge ihe nkiri na-agbasa kwa ọnwa.
Ọ na-aga n'ekwughị na ọ bụrụ na ịnwere Netflix, ị nwere ihe ị ga-elele mgbe niile. N'ezie, enwere ihe ntanetị ka ukwuu na-ekiri, ọ bụ ya mere anyị ji ahazie ọtụtụ nnọkọ kwa ọnwa iji kesaa ndụmọdụ maka fim na ihe ngosi iji nwaa. Ihe nyocha anyị kachasị ọhụrụ gosipụtara 10 Netflix ihe onyonyo na ihe ngosi gi nwere ike iju, anyị enwetakwala nnukwu nzaghachi, yabụ lelee ma ọ bụrụ na ihe ahụ efughị ​​gị. Dika Netflix di uku, agbanyeghi, obughi onye obula choro ịkwụ $ 13 ma obu $ 16 kwa ubochi iji nweta oru. Ọbụlatakwa atụmatụ $ 9 nke mbụ na-agbakwụnye ma ọ bụrụ na ịnwe obere ego, atụmatụ ahụ n’onwe ya anaghị egbochi ọtụtụ mmadụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ nnukwu ụzọ Netflix ndị na-agaghị efu ego dị ka nnukwu ego, anyị ga-eme ka ị ka mma: anyị etinyela ọnụọgụ abụọ Netflix ndị ọzọ ga-ekwe ka ị na-enuba ihe nkiri na ihe ngosi TV kpamkpam.
IMDb TV bụ ọrụ ntanetị ọhụụ nke anyị gwara gị maka n’oge na-adịbeghị anya, ndị mmadụ hụkwara ya n’anya. Igwe mmiri a na-apụta apụta nwere ọtụtụ ihe nkiri ama ama na ihe nkiri TV na-egosi na ịnwere ike ịkwanye n'efu na-akwụghị ụgwọ dime. Ọ na - arụ ọrụ n'ime ihe nchọgharị weebụ gị n'ezie, kamakwa na ngwa IMDb, nke pụtara na ị nwere ike ịgbanye ọdịnaya a n'efu na ngwa iOS gị ma ọ bụ gam akporo gị!
Lelee IMDb TV
Ọrụ ọhụụ anyị gwara gị okwu na mbido ọnwa a sitere na Redbox, ọ dịkwa iche na usoro Netflix ndị ọzọ anyị ga-ekpuchi na ngagharị a. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ iyi niile anyị kpuchitere dị ka Netflix n'ihi na ha na-eji ụdị nnyefe chọrọ, Redbox Live Free TV na-eji usoro TV ọdịnala ndị ọzọ.
E nwere ụyọkọ ọwa dị iche iche ma ha niile na-agbasa TV na-ebi ndụ, dị ka aha ọrụ ahụ na-egosi. 'Ll ga-ahụ akụkọ, ọdịnaya ọdịnala, ihe nkiri na-atọ ọchị, na ụyọkọ ihe ngosi TV a ma ama dịka Vidio ndị na-atọ ụtọ nke America, Frensic faịlụ, Esemokwu ezinụlọna Ihe omimi edoghi. Ọ bụ kpam kpam nwere elele, ọbụlagodi na enweghị njikọ, ị ga - enyocha ya site na websaịtị Redbox ma ọ bụ na ngwa Redbox na igwe ọ bụla
Lelee Redbox Free Live TV
Crackle anọwo ogologo oge ma ọ ka bụ otu n'ime ebe kachasị mma ịkwanye ọdịnaya n'efu. Dị ka ọ na-adị mgbe niile na ọrụ nkwanye n'efu, ị gaghị ahụ ụdị ọhụụ ọ bụla. Mana enwere otutu fim na ihe ngosi TV ịhọrọ. Nhọrọ ahụ gụnyere ọtụtụ ihe ị nụtụbeghị, mana ị ga-ahụkwa ọkacha mmasị kachasị. I nwere ike na-elele ihe omume nke ọ bụla Nkume nke ato nke anyanwu n'efu! Nke ahụ ọ dị ukwuu?!
Kanopy nwere ike ịbụ ọrụ mgbasa ozi kachasị mma nke ị nụtụrụla. Akụkụ kacha mma bụ na ị nweela ohere ịbanye na ya na-enweghị ịmara ya! Ọ bụrụ n’inwere kaadị ebe a na-ere akwụkwọ ma ọ bụ gaa kọleji, ikekwe ị nwere ike ịnweta nnukwu ọbá akwụkwọ Kanopy nke puku kwuru puku ihe nkiri sinima. Ọ bụrụ na ịnweghị kaadị ọba akwụkwọ, nke ahụ bụ nnukwu ihe mere ị ga-eji gaa otu. Ga-eju gị anya etu nhọrọ nkwanye ugwu si dị, ma enwere Kanopy ngwa ọdịnala ọ bụla, gụnyere iOS, Android, Fire TV, Roku, Apple TV, wdg.
Leba anya na Kanopy
Hoopla dị ka Kanopy na ị nwere ike ịnweta ya n'efu ma ọ bụrụhaala na ị nwere kaadị ebe a na-edobe akwụkwọ ya na ọbá akwụkwọ ọha nke obodo gị na-ekere òkè. Ihe gbagwojuru anya bụ na inwere ike ịchọta ihe nkiri sịnịma ndị ọzọ ama ama na ihe nkiri TV ebe a karịa na Kanopy. M na-agbasa ozi Ex Machina na Hoopla n’ụbọchị nke ọzọ iji jikere maka Devs, usoro amụrụ ọhụrụ Alex Garland nke a ga-ewepụta na Hulu ọnwa na-abịa. Hoopla dị egwu, ọ bụ n'efu na ngwa ọdịnala ahụ na-ahapụkwa nbudata maka ikiri offline mgbe ị na-eme njem. Cheta na Kanopy na Hoopla na-arụ ọrụ dịka ọba akwụkwọ, yabụ na ị nwere oge iji kesaa ọdịnaya tupu ị tụgharịa ya ".
Lee anya na Hoopla
Vudu abụghị ọrụ n'efu kpamkpam, mana ọ na - eme ndepụta ahụ n'ihi na ọ nwere katalọgụ buru ibu nke ọdịnaya nwere n'efu. N’ezie, enwere ihe karịrị 1 fim dị iche iche ị nwere ike ịkwanye n’efu. A na-akwado ọdịnaya Vudu niile na - akwado mgbasa, mana ndị ọzọ na - arụ ọrụ gụgharia n'efu gụnyere na ngagharị a, ewezuga ndị ọba akwụkwọ ọhaneze na - akwado. Tụkwasịnụ anyị obi, ọtụtụ ihe nkiri na-adọrọ adọrọ ị ga - akọ na Vudu n’agaghị otu mkpụrụ ego dinarịị.
Lee anya na Vudu
Ọ bụrụ na enwere otu ọrụ n'etiti ọnụọgụ n'efu nke Netflix nke nwere ọtụtụ ihe nkiri dị elu dịka Vudu, ọ bụ Tubi TV. N’ezie, enwere ọtụtụ afọ ojuju ị ga - ekwenye na ị naghị akwụ ụgwọ ya. Ihe omumu ihe omumu dika Paramount, Lionsgate, MGM na Starz na-enye Tubi TV ihe di n’ime ha, a na-agbakwunye ihe nkiri ohuru oge niile. M na-agbasa ozi Southpaw na Tubi TV ụbọchị nke ọzọ, ma ọ bụ ihe ijuanya na ọ dị mma!
Na-ekiri Tubi TV
Ọdụ Roku anaghị enye ikike ikikere maka ihe niile ka ọrụ ndị a niile. Kama, ọ na-ejikọ ihe nkiri na-aga n'ihu na-ekiri, ihe ngosi, na ọbụna telivishọn ndụ site na ọrụ ndị ọzọ ka ị wee nwee ike ịchọta ọdịnaya a niile n'otu ebe. Ọ baghị uru ikwu, nke a bụ naanị na ngwaọrụ Roku. Mana ebe ọ bụ na ngwaọrụ Roku bụ ngwaọrụ mgbasa ozi kachasị ewu ewu na-ewu ewu n'ụwa, ọ nwere ike bụrụ ihe dị mma iche na ọtụtụ ndị na-agụ nyocha a nwere otu.
Lelee ọwa Roku
Ọtụtụ mmadụ na-eche na Plex bụ sava mgbasa ozi nke ndị mmadụ ji ekiri ihe nkiri na ihe nkiri TV na-egosi na ha ebudatara iwu na-akwadoghị. O doro anya na ọ bụ otu esi eji ikpo okwu, mana enwere ọtụtụ ihe karịa Plex. Na mgbakwunye na iji ya dị ka ihe nkesa iji na-enyocha ihe nkiri dijitalụ nke gị, ihe nkiri TV, na egwu ị budatara - n'ụzọ iwu kwadoro ma ọ bụ na ọ bụghị - Plex nwekwara nnukwu katalọgụ ọdịnaya nke ị nwere ike ịkwanye n'efu.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, Pluto TV bụ ọnụọgụ nhọrọ kachasị na Netflix. Ọ bụkwa atụmatụ ọzọ na-akwụghị ụgwọ iji kwụọ ụgwọ TV n'ihi na ọ na-ejikọ ụdị oriri abụọ na otu ọrụ. Nke mbu, iga acho otutu uzo ihe omuma gi na-enyocha n’efu, tinyere otutu uzo uzo ihe nkiri, NBC News Now, CNN, CBS News, Channel MTV, Fail Army, na ndi ozo. Ha dị otu narị. Na mgbakwunye na nke a, ị ga-ahụkwa ihe nkiri achọrọ na usoro TV nke ị nwere ike ịgbasa n'oge ọ bụla. Ugbu a, ọ bụrụ n’ị ga-agbaghara m, aga m agbasa ozi Ọkachamara ahụ.
Na-ekiri Pluto TV
Isi iyi nke onyonyo: Marroun / Shutterstock kwuru
Zach Epstein arụwo ọrụ na gburugburu ICT ruo ihe karịrị afọ iri, nke mbụ na azụmaahịa na mmepe azụmaahịa ya na ndị ọrụ nzuzo abụọ, mgbe ahụ dịka onye edemede na onye nchịkọta akụkọ na-ekpuchi akụkọ azụmaahịa, elektrọniki ndị ahịa. na nkwukọrịta ozi. Edepụtala ọrụ Zach site n'ọtụtụ akwụkwọ ugbu a. Ọ na - adịbeghị anya aha ya bụ Forbes kpọrọ aha ya dịka otu n'ime 10 kachasị ike “mmetụta na - eme ihe n'echeghị eche” n ’ụwa, yana otu onye n’ime Internetntanetị 30 nke ihe ndị ọkachamara si n’aka magazin Inc.
ụzọ ọzọBGRnkemgbasaumu anwurufimgratuitementNetflix
Mgbe ọrịa nwụrụ na mberede, Céline Dion: n'akụkụ ihe ndina nke ụmụnne nwoke na nwanyị ikpeazụ ịrara nne ya.
NDPSMỌD:: 21 GLLE Telefon
Ndị a bụ ihe ngosi 10 kachasị elele nke onye ọ bụla n'izu a na Netflix…
Ihe a bụ ihe ịtụnanya nke ga - aza azịza ajụjụ anyị mgbe "Endgame"…
Vidiyo si na telivishọn telivishọn “Falcon” na-ekpughe ndị na-akpa ike nke…
Ihe nkiri Prequel "Mma na anụ ọhịa ahụ" erutela na Disney + - BGR